Umvelisi ogqwesileyo weenyawo kunye neFactory |Gimarpol
1. intsimbi engqukuva intloko ethe tyaba kunye nendawo gasket for ukuma simahla kunye panel.I-zinc plated stud yentsimbi kunye ne-anti vibration nut edityanisiweyo kunye ne-detent feature.Intsimbi yentsimbi iya kunikwa ubungakanani ukuze ikwazi ukumelana nesiseko esikhoyo.
2. Intloko yentsimbi yentsimbi ecaba iya kubamba iintambo.I-zinc plated stud yentsimbi kunye ne-anti vibration nut edityanisiweyo kunye ne-detent feature.Intsimbi yentsimbi iya kunikwa ubungakanani ukuze ikwazi ukumelana nesiseko esikhoyo.
Isiseko se-pedestal kufuneka sivumele i-pedestal base stud yentsimbi ekubhekiselwe kuyo ngasentla.FFH = 50mm ukuya kwi-2,500mm
I-Freelay Pedestal Head Gasket yolwakhiwo olufanelekileyo lwerabha oluncamathele ngokusisigxina kwi-Cornerlock pedestal head iyafuneka.Oku kuya kubonelela ngomqobo wokuzihlukanisa phakathi kwendawo yolawulo kunye nentloko ye-pedestal.Izinto ze-gasket ziya kuba nokuxhathisa kombane <104 Ω
Ikhowudi yeMveliso Isiseko sentloko esicaba
Inkcazo I-pedestal idityaniswe kunye nentsimbi ebandayo yentloko ye-flat fillet edityanisiweyo kunye ne-stud kunye nesiseko seplate fillet edityaniswe ityhubhu.
Intloko gasket NA
Intloko Ipleyiti yentloko 76mmx76mmx3mm, uhlobo lwentsimbi ebandayo, enemingxuma emi-4 yekona eyamkela i-6mm dia.izikrufu zentsimbi yekona, 4 edge imingxuma iziko ukwamkela stringers ibhokisi kunye 6mm dia.izikrufu.Ipleyiti yentloko ifakwe i-welded nge-hollow / stud eqinile kunye ne-2 nuts ukutshixa ukuphakama.
Intloko/umbhobho I-19.5mm dia.x90mmL isikhonkwane sentsimbi esomeleleyo esifakwe ngamandongomane entsimbi
Isiseko ityhubhu / stud 22mm OD.kunye ne-1.2mm eludongeni ityhubhu yentsimbi yokwamkela intloko
Isiseko sepleyiti 100mmx100mmx2.2mm yentsimbi ebandayo yeplate fillet edityaniswe nesiseko stud / ityhubhu
Ukwaleka Intloko kunye nesiseko se-electro zinc yellow okanye isilivere
Axial Umthwalo CISCA 22.5kn imiz.
Okulandelayo: isiseko sangaphandle